म खोच्याउँदै स्टेज जान्थेँ, दर्शकले अभिनय भन्ठान्थे: मदनकृष्ण श्रेष्‍ठ – Namaste Filmy
म खोच्याउँदै स्टेज जान्थेँ, दर्शकले अभिनय भन्ठान्थे: मदनकृष्ण श्रेष्‍ठ
[dropcap]ग[/dropcap]त असार १५ मा दहीचिउरा खान र रोपाइँको रमझम चलिरहेका बेला समाजलाई मनोरञ्‍जन र चेतना भर्न वर्षौं खर्चेका कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठलाई भने अप्रेसन थिएटरमा लगिँदै थियो। उनमा आत्मविश्‍वास थियो। १६ गते जापानी र नेपाली चिकित्‍सक टोलीले उनको सफल सफल शल्यक्रिया गरे। पार्किन्सन्को अप्रेसनपछि आईसीयूबाट निस्केको दुई साता नबित्दै श्रेष्ठ स्टेजमा उत्रेका छन्। अहिले नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा महजात्रा चलिरहेको छ। आफ्नो पीडा पिएर अरूलाई हँसाउन कतिको गाह्रो हुन्छ? सुनाकोठीस्थित निवासमा आइतबार अशोकप्‍यासी राईसँग उनले आफ्नो अनुभूति साटेका छन्।
अप्रेसन गरेको छोटो समयमै स्टेजमा फर्कंनुभयो?
राम्रो संयोग पर्‍यो। अघिल्लो चरणको सो (महजात्रा) सकिनासाथ अप्रेसन भयो। दोस्रो चरणको शोसम्ममा ठीक भइहालेँ। अहिले सजिलो र खुसी पनि लागेको छ।
अघिल्लो संस्करणको शोमा अप्ठ्यारो थियो?
निकै गाह्रो भएको थियो। म खोच्याउँदै स्टेजमा जान्थेँ। कतिपय शब्द उच्चारण गर्न अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। दर्शकले अभिनय भन्ठान्थे। दर्शकको ध्यान हाँसो र मनोरञ्‍जनमा हुन्थ्यो भने चिकित्सकको ध्यान मेरो खुट्टामा थियो। मलाई पनि कतिखेर शो सकिएला जस्तै लाग्थ्यो। तर स्टेजमा मुडमा रहनै पर्‍यो। अहिले कुनै अप्ठ्यारो छैन। रमाइलो भइरहेको छ।
तपाईंको पहिले र अहिलेको प्रस्तुतिमा दर्शकले फरक पाउँछन्?
त्यस्तो खास फरक त पाउँदैनन्। जे गरे पनि, जस्तो भए पनि अभिनय होला भन्ठान्छन्। कलाकारलाई यति चाहिँ सजिलो हुने रहेछ।
बिरामी हुँदाको अवस्था सम्झँदा कस्तो लाग्छ?
अनुहार बिग्रने, ठुस्स परेको देखिने, हाँसेको रिसाएको थाहै नहुने। पहिलेका कतिपय फोटो हेर्दा ओ हो म त्यस्तो पो थिएँ जस्तो लाग्छ। आठ वर्ष अघिदेखि मलाई सताउन थालेको हो। तीन वर्षदेखि औषधि खान थालेँ। अप्रेसन गर्न एकडेढ वर्ष ढिला भएको भए डरलाग्दो अवस्था आउन सक्थ्यो।
अप्रेसन गर्न किन ढिला भयो?
व्यस्तताले नभ्याएको हो। व्यायाम गर्ने, औषधि खाने, काम गर्ने हिँड्ने यत्तिकैमा समय बित्यो।
आफूलाई पार्किन्सन् भएको थाहा पाउँदा कस्तो लागेको थियो?
सुरुमा त मैले सामान्य रूपमा लिएँ। अनौठो र अत्यास केही अनुभूति भएन। तर जब चारपाँच वर्ष औषधि आएको बिरामीको अवस्था देखेँ त्यसले चाहिँ मलाई झस्क्यायो। त्यसैपछि अप्रेसन गर्ने निर्णय गरेँ।
अप्रेसन गर्नुपर्ने भयो भन्ने थाहा पाउँदा नि?
यसबाट पनि म खासै विचलित भइनँ। श्रीमतीको तीनचार पटक अप्रेसन भइसकेको र म आफैं पनि मोडेल हस्पिटलसँग आबद्ध भएकाले धेरै बिरामी, अप्रेसन, त्यसपछिको अवस्था देखिसकेकाले आफ्नो अप्रेसन गर्ने कुरा पनि सामान्य नै लाग्यो।
श्रीमती र आफ्नै अप्रेसन गर्दा कुन बढी पीडादायी लाग्यो?
आफ्नो मान्छेको अप्रेसन हुनु झनै गाह्रो। आफ्नो त आफूले सहे पुग्छ। मानसिक रूपमा तयार भए हुन्छ। तर अरूका लागि आफूले सहेर हुँदैन। आफू तयार भएर पुग्दैन। त्यो अवस्था चाहिँ निकै पीडादायी हुँदोरहेछ।
अप्रेसन गर्न लग्दा मनमा डर त भयो होला?
अपरेसन भनेपछि मार्न लगे जस्तो रोइकराई गरी बाईबाई गरेको पनि देखिन्छ। तर अप्रेसन भनेको निको पार्न लगेको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। अर्को कुरा अब पनि यतिकै रहेँ भने भविष्यमा मैले जुन अवस्था भोग्नुपर्छ त्यो अकल्पनीय छ भन्ने थाहा थियो। सायद त्यो अनुभूतिले पनि अप्रेसनका लागि मलाई आत्मविश्वास दिएको हुनुपर्छ।
अप्रेसन थिएटरबाट निस्केपछि चाहिँ कस्तो लाग्यो?
बढो आनन्द। म बिरामी छु जस्तै लागेन। चिकित्सकले जे खाए पनि हुन्छ भनेका थिए। आईसीयूमा बसेर दालभात खान आफैंलाई अप्ठ्यारो लागेकाले म:म खाँदै बसेँ। सामान्य अवस्थामा हिँड्दा पनि मान्छेले सञ्चो छैन कि क्या हो भनेर सोध्ने, अनुहारमा चार्मिङ नहुने, झोक्राएजस्तो देखिने, हात खुट्टा राम्ररी नचल्ने समस्याबाट मुक्ति पाएँ भन्ने कुराले खुसी दिने नै भयो। अनुहारको हाउभाउका आधारमा काम गर्ने मान्छेलाई त्यस्तो स्थिति पक्कै सहज थिएन।
उपचार महँगो हुन्छ भन्छन् कति खर्च भयो?
सुरुमा साढे १७ लाख रुपैयाँ लाग्छ भनिएको थियो। तर १४ लाख रुपैयाँ लाग्यो। पार्किन्सन्को जसरी अप्रेसन भयो यो नेपालमा पहिलो रहेछ। १० वर्षका लागि ढुक्क भयो। तर औषधि पनि खाइरहेको छु। १० वर्षपछि पुन: पेसमेकर फेर्नुपर्छ।
बिरामी भएका बेला आफन्त शुभेच्छुक भेट्न आउँदा कस्तो लाग्दो रहेछ?
तीन वर्षअघि मेरो घाँटीको अप्रेसन गर्दा यति धेरै मान्छे भेट्न आए कि आफैंलाई विश्वास भएन। म र हरिवंश कार्यक्रम गर्ने, हँसाउने, हिँड्ने। कहिलेकाहीँ आफ्ना लागि हामी दुई जनामात्रै छौं जस्तो लाग्थ्यो। तर त्यसपछि हाम्रो लागि यति धेरै मान्छे रहेछन् जस्तो लाग्यो। त्यसबेला मान्छेको भीड देखेर होला यसपटक चिकित्सकले गोप्य राखेका थिए।
साभार: अन्नपुर्ण पोस्ट ।
एकपछि अर्को फिल्ममा ब्यस्त हुदै सगुन ।
बेपत्ता 'कोहिनुर' जोडीको सन्देश । अस्वस्थ छन श्रीकृष्ण ।